မောင်ဖုန်းမြင့်: 6/1/10 - 7/1/10
ဂလိုဘယ်ရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်းက ဇတ်ဝင်ခန်း
ကလဲရီယာ ( ပြည်နယ် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အရာရှိ )
မင်းရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့ သတင်းပို့ချက်က တဆင့်
9/11 လုပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်တဲ့ လူတွေဟာ
မှန်ကန်တယ် / ထောက်ခံတယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး
ရေးထားပါလား " . . . . .
" ကျွန်မက ဒီနိုင်ငံမှာ လွတ်လပ်စွာ
ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့် ရှိတယ်လို့ ထင်ထားတာ " . . . .
-------------------------------------------- . . . . . . . . . ------------------
ရှောင် ( ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးမှ ပြောင်းရွှေ့လာသူ)
ဘာလို့ဝတ်နေရမှာလဲ" . . . .
"သတိထားစမ်းပါ မင်းဒီနိုင်ငံသား ဖြစ်ဖို့ ဒီတစ်ကြိမ်ပဲ လိုအပ်တော့တာလေ "
"ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အတွက် ကျွန်တော်ဟာ အာရှသားပဲ"
"ဟိုမှာ နက်ဖြန်ဆို နိုင်ငံသား ဖြစ်တော့မယ့် ကျွန်တော့ အဖေ
သူက အခုချိန်မှာ "ရှား" တွေကို မုန်းတီး ရန်လိုနေတာ
ဒါပေမယ့် အီရန်မှာနေတုန်းက သူတို့နဲ့ စီးပွားဖက်တွေ
လုပ်ငန်းတွေ အသိမ်းခံလိုက်ရတော့မှ နယ်စပ်ကနေ
တာကီ(Turkey) ကိုဖြတ်ပြေး ပြီး ဒီရောက်လာတယ်" ။. . . . .
မစ္စ ကယ်လီ ( အစိုးရှရှေ့နေ )
" ကျွန်မတို့က ဆာရီဝတ်ထားတဲ့
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး အကြောင်းပြောနေတာ
သူ့အိပ်ခန်း ကိုရှင် စစ်ကြည့်လိုက်ရင် ဘယ်လောက်ခြိုးခြံထားသလဲဆိုတာ တွေ့ရမယ်
သူ့ရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု မှတ်တမ်းတွေအရ ဂျီဟတ် တွေရဲ့
ရှေးဟောင်း တံဆိပ်တွေ စုဆောင်းထားတဲ့သူ
ဒါ . . . အသေခံဗုံး ခွဲမှုကို ယုံကြည်တယ်ဆိုတာ ပြနေတာပဲ " ။ . . . .
( ယူအက်စ် မက္ကစီကို နယ်စပ် တွင် သေနတ် ပစ်ခံရ၍ သေဆုံးသွားသူ )
ကောင်းသော ညနေခင်းပါ မစ္စတာ ဆန်းချက်စ်
ကျွန်တော်က အထူးရဲ အရာရှိ မက်ဘော့ခ်ပါ
မာရီယာ များ ပြန်ရောက်လာ ပြီလားသိချင်လို့
( ဂျုးလူမျိုးယောင် ဟန်ဆောင်၍ သက်သေခံ လက်မှတ် လျှောက်ထားသူ )
မင်း ဗလီဆရာတော့ မဟုတ်ဘူး မို့လား
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် တင်းကျပ်တဲ့
ဂျုးဘာသာရေး သင်တန်းတွေ တက်ခဲ့ ရပါတယ်
စပျစ်ရည် မုန့်ချိုနဲ့ ဥပုဒ် ပြုနိုင်ပါတယ်
မင်း ဟေးဗရူးစာ ရလား
အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ ၀တ်ပြုဆု တောင်းနိုင်ပါ့မလား ..
ဒါဆို မင်း ဒီလူကြီးမင်းရှေ့မှာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပြ
(လိမ်လည် ၀တ်ပြုသံများ )
ရက်ဘီး ( Beth Shalom ဘုရားကျောင်းမှ ဂျုးဘာသာရေးဆရာ)
ကြည်နှုး သာယာဖွယ်ရာ ၀တ်ပြုသံပါပဲ ...
နောက်ဆို တနင်္ဂနွေ နေ့တိုင်း ကျုပ်တို့ ဘုရားကျောင်းမှာ
လာဝတ်ပြုဆုတောင်းပါလို့ ဖိတ်ကြားပါရစေ .. ။
Posted by phone myint at 9:33 PM2comments: Links to this post
ရေအစုံ ၊ မီးအစုံ
ခင်ဗျားတို့ အတွက် ဒီနေရာမှာ ခင်းကျင်းထားခဲ့ပါတယ် . . .
ဘီဒိုအင် အာရပ် ၀တ်စုံနဲ့လား
ဥရောပ တိုက်သားလို အကောင်းဆုံးဝတ်စုံနဲ့လား
အရှေ့တိုင်း ဆန်ဆန် ပိုးသား အဆင်ဆန်းတွေနဲ့လား
အရှေ့အလယ်ပိုင်း က အမျိုးသမီးတွေလို ခေါင်းမြီးခြုံ လုံနေမှာလား
တဒိုင်းဒိုင်း ကာကွယ်နေရ လောကဓံတရား
သိနားလည်မှု အစိုင်အခဲဟာ အရည်ပျော်
အမောပြေ ၊ အပန်းပြေ လမ်းကြုံရင်
ခြေ၀င်ဆေးနိုင်ပါတယ် ( နှလုံးသွေးများဖြင့်)
အဆင့်မြင့် တွေးခေါ်သူတွေ မဟုတ်ခဲ့တော့
နောက်ဖက် အကြည့်ပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာ ကြည့်
လုံခြုံခဲ့ပြီလား ၊ ခြုံငုံမိပြီလား
လုံခြုံအောင် မျက်လုံးတွေကို စောင့်ကြည့်ထား
ယာယီ . . .
ငါ . . . ဖောက်ခွဲခဲ့တာ . . . မဟုတ်ဘူး
ငါ့ကြောင့် . . . နွှဲနေရတာ . . မဟုတ်ဘူး
ငါ . . . တီထွင် ဆန်းသစ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး...
အစဉ်အလာ ၊ ဘောင်ဝင် ၊ အလေးအမြတ်ပြု
နိုင်ငံတော် သီချင်း သံပြိုင်သီဆို
သစ်ပင် စိုက်ကြ . . . သစ်ပင်စိုက်ကြ
ဒီအပြင် . .
အတွေးအခေါ်တွေကိုပါ သစ်ပင် .စိုက်သလို စိုက်ကြ
ဟုတ်ကဲ့ . . .
ရေအစုံ၊ မီးအစုံ ၊ ကြေကွဲဖွယ်ရာ ပျော်ရွှင်မှု့ရောင်စုံ
အခန်းထဲမ၀င်ခင် အန္တရာယ် အချက်ပေးခလုပ်ကို
ဒါပါပဲ . . . . ။ ။
Posted by phone myint at 11:05 PM3comments: Links to this post
ချမ်းသာခြင်းဟာ ခြင်္သေ့လို ဟိန်းဟောက်တယ် ။ ငွေရှာခြင်း အတတ်ပညာဟာ ကျန်းမာ သန်စွမ်းတဲ့ လိုင်းယွန်း တစ်ကောင်နဲ့ နပန်းလုံးနေရသလိုပဲ ။ ပိုက်ဆံ ကလွဲပြီး ဘာမှ မရှိတာနဲ့ အဘိဓမ္မာရှိပြီး ခြူးတစ်ပြားမှ မရှိတာ ဟာ ထူးမခြားနား ပတ်ပျိုးနဲ့ မိုးမျှော်နေရသလို + = - နဲ့ အပေါင်း ညီမျှခြင်း အနှုတ် ၊အနှုတ် ညီမျှခြင်း အရှုပ် အထုပ်ရဲ့ Plus Equal Minus ပဲ။ ငါ့ဘဝရဲ့ အဓိပတိဟာ ၂၀၀ ကျပ်တန် လိုင်းကား ။ ငါ့အနုပညာရဲ့ ပါရမီဟာ ၂၀၀ ကျပ်တန် လိုင်းကား ။ ငါတို့မျှော်နေရတဲ့ ရွှေဧည့်သည် ငွေဧည့်သည် ဆိုတာကလဲ ၂၀၀ ကျပ်တန် လိုင်းကားပဲ ။ ယိုယွင်းလာနေတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး အရ အီးစီဂျီမလို ၊ စီတီ စကင်ဖတ်စရာမလို ဂိတ်ဆုံးမယ့် မှတ်တိုင်ဟာ ယခင် တံတားလေး ယခု ရွာသာကြီး ။ ပလိုင်းပေါက်နဲ့ ဖားကောက်တယ် ပြောရအောင်ကလဲ ဖားနဲ့တူတာဆိုလို့ မျက်လုံးပြူးပြူး ပုရစ်တောင် မတွေ့ဖူးဘူး ။
အောင်မြင်မှု ၊ချမ်းသာသုခနဲ့ ဓနဥစ္စာဟာ ငါတို့နဲ့ အလှမ်းကွာတဲ့ တက်ကျမ်းကြော်ငြာ ဖြစ်ပြီး ။ အေဗရာမိုဗစ် ဟာ ဘောလုံးအသင်း ထောင်ချင်တဲ့ ရောဂါရနေသလို ငါတို့ဟာလည်း အချိန်တန်ရင် ဂျက်ဒန်နီယယ် လို ဂျေအန်ဘီ လို စကော့ ဝီစကီနဲ့မှ သွေးနွေးချင်ခဲ့ပြီး ပဲရစီဟီလ်တန်နဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ပွားမယ် လေဒီဂါးဂါး နား ထောင်ပြီး ငြိမ့်ချင်နေတဲ့ ရောဂါသည်တွေ ဖြစ်တယ် ။ အခုလောလောဆယ် မှာ အရင်းကျမ်းဖတ်တယ် ။ ကိုယ်ထက်သာရင် ဓနရှင် ဘူဇွာ ဖောက်ပြန်ရေးသမားလို့ စွတ်စွဲမယ် ။ ပစ္စည်းမဲ့ချင်သလိုလို တော်လှန်ချင် သလိုလို နဲ့ အာခေါင်ခြောက်လာရင် ဓနသီဟ တံဆိပ် ရေသန့်ဗူးဖောက်သောက်မယ် ။ ဓနသီဟ တံဆိပ် မြေပဲလှော်ဝါးမယ် ။ ဓနသီဟ တံဆိပ် အဝေးပြေးကား ကိုစီးမယ် ။
အခါကြီး ရက်ကြီး သင်္ကန်းစည်းဖြစ်ရင်တောင်မှ ဓနသီဟ သင်္ကန်းတိုက်က သင်္ကန်းနဲ့မှ ဖြစ်မယ် ။
အိုဘယ့် . . . ဘယ့် . .. . အိုဘယ့် ဓနသီဟ . . . . . .. ။
Posted by phone myint at 9:59 AM3comments: Links to this post
နိစ္စဓူဝ ရက်စွဲများ နဲ့ ရှင်သန်ခြင်းကို ငါ ငြင်းဆိုတယ် ။
ယိုစိမ့် ကျမလာအောင် ကာထားပြီးပါပြီ
အဲ့ဒီလို စီဒီ လည်ပတ်နေပုံက . . .
ဘတ်စ်ကားအိုကြီးလို . .
ကလေးများ ပြေးလွှား ကစားကြပုံဟာ
သွေးဆုံးနေသော အိပ်ကပ်များ အထက်မှ
ရယ် ရယ် မော မော နှင့်
နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံ
ပွဲပေါင်းများစွာ ( က ) စားခဲ့သူတွေလို
ဒီနေ့ ဒီရက် ဒီနာရီများ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ
လူကြိုက်များပြီး တန်ဘိုးနည်း တဲ့ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခု ဖြစ်တယ် ။
Posted by phone myint at 9:54 PM 1 comment: Links to this post
နိစ္စဓူဝ ရက်စွဲများ နဲ့ ရှင်သန်ခြင်းကို ငါ ငြင်းဆို...